newsare.net आइएमई पेमार्फत कोरियाली भाषा परीक्षाको आवेदन शूल्क बुझाउन सकिने, एसएमएसबाटै पाईन्छ भौचर - newsare.net
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया जाने नेपालीले ‘आइएमई पे’ मार्फत भाषा परीक्षाको आवेदन शूल्क बुझाउन पाउने भएका छन । चैत ८ गते देखि आइएमई पेमार्फत इपीएस कोरिया टपिक परीक्षा शूल्क भुक्तानी गर्न सक्ने आइएमईले जानकारी दिएको छ । आइएमई पेका अनुसार सेवाग्राहीले एजेन्ट पार्टनरका अतिरिक्त स्मार्ट फोनबाहक सेवाग्राही तथा आफैले ‘आइएमई पे’ डाउनलोड गरि सिधैं इपीएस कोरिया टपिक परीक्षा शूल्क भुक्तान गर्न सक्नेछन । परीक्षा शूल्क भुक्तानीका लागि परीक्षार्थीहरूको पुरा नाम, पासपोर्ट र मोबाइल नम्बर स्पष्टसँग उल्लेख गर्नुपर्नेछ । परीक्षा शूल्क भने २४ अमेरिकन डलर दस्तुर लाग्नेछ । परीक्षा… The post आइएमई पेमार्फत कोरियाली भाषा परीक्षाको आवेदन शूल्क बुझाउन सकिने, एसएमएसबाटै पाईन्छ भौचर appeared first on Bizkhabar Online. Read more
काठमाडौं । एक हप्ताको अविरल बर्षासँगैको बाढीले महोत्तरी जिल्लाका सडक सञ्जाल अस्तव्यस्त भएका छन �
काठमाडौं । एक हप्ताको अविरल बर्षासँगैको बाढीले महोत्तरी जिल्लाका सडक सञ्जाल अस्तव्यस्त भएका छन । गत असार २५ गते मध्यरातदेखि परेको पानीसँगै आएको बाढीले जिल्लाका २४ सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले जानकारी दिएको छ । जिल्लाका मुख्य ४२ सडकमध्ये २४ मा व्यापक क्षति भएको हुँदा यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ परेको छ । तराई–मधेशको ‘लाइफलाइन’ भनिएको हुलाकी सडक, बर्दिवास–जलेश्वर सडक, जलेश्वर–जनकपुर सडक, जलेश्वर–सम्सी सडक, जलेश्वर–भ्रमरपुरा हुँदै जनकपुर जोड्ने सडक, जलेश्वर–मटिहानी सडक, जलेश्वर–रौजा सडकलगायत जिल्लाको प्रमुख सडकसहित २४ सडक बाढीले अवरुद्ध भएको समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार… The post महोत्तरीको २४ सडकमा बाढीले क्षति पुर्यायो, बेलिब्रिजमार्फत ५ दिनभित्रै संचालनमा ल्याउने appeared first on Bizkhabar Online.
नेपाल भित्रने पर्यटकको संख्या १२ प्रतिशतले बढ्यो, ६ महिनामा पौने ६ लाख पर्यटक भित्रिए
काठमाडौं । २०१९ को पहिलो ६ महिनामा नेपाल भित्रने पर्यटकको संख्यामा बृद्धि भएको छ । २०१९ को पहिलो ६
काठमाडौं । २०१९ को पहिलो ६ महिनामा नेपाल भित्रने पर्यटकको संख्यामा बृद्धि भएको छ । २०१९ को पहिलो ६ महिनामा नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकको संख्या ५ लाख ८५ हजार ५ सय ३१ पुगेको छ । जुन अघिल्लो बर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२ दशमलव ६ प्रतिशतले बढी हो । अध्यागमन विभागका अनुसार सो अवधीमा ४ लाख ९० हजार ५ सय ३४ जना विदशी पर्यटक हवाई मार्गमार्फत नेपाल आएका हुन भने ९४ हजार ९ सय ९७ जना विदेशी पर्यटक स्थलमार्गबाट आएका हुन । यस्तै यो बर्षको पहिलो ६ महिनामा भारतबाट आउने पर्यटकको… The post नेपाल भित्रने पर्यटकको संख्या १२ प्रतिशतले बढ्यो, ६ महिनामा पौने ६ लाख पर्यटक भित्रिए appeared first on Bizkhabar Online.
गड्डाचौकी भन्सारको राजस्व साढे ३६ करोड मात्रै, विषादी परीक्षणका कारण लक्ष्य भेटाउन सकिएन
काठमाडौं । कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डाचौकीले गत आर्थिक वर्षमा ३६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्रै र�
काठमाडौं । कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डाचौकीले गत आर्थिक वर्षमा ३६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आव ०७५/७६ मा ४० करोड १२ लाख ६२ हजार राजस्व सङ्कलनको वार्षिक लक्ष्य लिएको भन्सारले ३६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आर्थिक मसान्तको अन्तिमतिर भारतबाट तरकारी, चिनीलगायतका वस्तु कम भित्रिएकाले राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत भीमप्रसाद अधिकारीले बताएका छन । विषादी परीक्षण गरेर मात्रै तरकारी र फलफूल आयात गर्न भनेकाले पनि राजस्वमा गिरावट आएको प्रमुख भन्सार अधिकृत अधिकारीको भनाई रहेको… The post गड्डाचौकी भन्सारको राजस्व साढे ३६ करोड मात्रै, विषादी परीक्षणका कारण लक्ष्य भेटाउन सकिएन appeared first on Bizkhabar Online.
आईएमएफ बाट दिईन लागार्डले राजीनामा, यस्तो छ नयाँ कार्यकारी नियुक्तीको तयारी
काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) बाट आगामी सेप्टेम्बर १२ बाट लागू हुनेगरी कोषका कार्य
काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) बाट आगामी सेप्टेम्बर १२ बाट लागू हुनेगरी कोषका कार्यकारी प्रमुख क्रिस्टियन लागार्डले राजीनामा दिएको घोषणा गरेकी छन । लागार्डले युरोपेली केन्द्रीय बैंकको अध्यक्षमा मनोनयनका क्रममा रहेकाले मुद्रा कोषबाट राजीनामा दिएको मंगलबार घोषणा गरेकी हुन । उनको राजीनामासँगै आइएमएफको नयाँ कार्यकारी प्रमुखको खोजी हुन थालेको छ । लागार्डले भनेकी छन, ‘युरोपेली केन्द्रीय बैंकको अध्यक्षको रुपमा मेरो मनोनयनको प्रक्रिया शुरु भएको छ । मैले मुद्रा कोषको सर्वोत्तम हितका आधारमा यो निर्णय लिएकी छु । यसबाट कोषमा नयाँ कार्यकारी प्रमुख छनौट गर्ने बाटो खुला गर्न मद्दत गर्नेछ… The post आईएमएफ बाट दिईन लागार्डले राजीनामा, यस्तो छ नयाँ कार्यकारी नियुक्तीको तयारी appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । अनलाइनबाट उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्ने कार्यको शुभारम्भ भएको छ । उद्योग, वाणिज्य
काठमाडौं । अनलाइनबाट उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्ने कार्यको शुभारम्भ भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले संयुक्त रूपमा महासंघ सचिवालयमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको शुभारम्भ गरेका हुन । उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई अनलाइन प्रणालीबाट जारी गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालय र महासंघबीचको लामो अभ्यास पछि भदौ १ गतेदेखि ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघबाट त्यसको सुरुवात गर्ने गरी बुधबार सफ्ट लन्च गरिएको हो । नेपालबाट निकासी हुने वस्तुका लागि जारी हुने उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्ने कार्य महासंघले विगत ५ दशकभन्दा बढी समयदेखि भारत… The post अब अनलाइनबाटै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, निकासी ब्यापारमा सहज appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमको मोबाईल सेवाको अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने भएको
काठमाडौ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमको मोबाईल सेवाको अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने भएको छ । प्राधिकरणको बुधबार बसेको बोर्ड बैठकले टेलिकमको तेस्रोपटक अनुमतिपत्र नविकरण गर्नका लागि तोकिएको २० अर्ब रुपैयाँ किस्तामै लिने र लाईसेन्स नविकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । टेलिकमले तेस्रोपटकको मोबाईल सेवाको लाईसेन्स नविकरणका लागि गत माघमा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ भने तिरीसकेको छ । सो रुपैयाँ तिरिसकेपछि टेलिकमको अनुमतिपत्र नविकरण गर्नका लागि प्राधिकरणलाई संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयलाई गत जेठमै निर्देशन दिएको थियो । नेपाल टेलिकमलाई सरकारले नविकरण दस्तुर विभिन्न ५ किस्तामा बुझाउने सुविधा उपलब्ध गराएपनि… The post टेलिकमको अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने निर्णय, २० अर्ब कायम गरि किस्तामै शुल्क लिइने appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि हालसम्म बक्यौता नबुझाउने सेवाप्र
काठमाडौं । नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि हालसम्म बक्यौता नबुझाउने सेवाप्रदायकसँग स्पष्टिकरण सोधेको छ । प्राधिकरणले तोकेको अन्तिम म्यादसम्म पनि सेवाप्रदायकले बक्यौता बुझाउने मेसो नदेखाएपछि स्पष्टिकरणका लागि १० दिनको समय दिएको हो । बुधबार बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले विभिन्न शिर्षकमा करिव ४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न अटेर गर्ने सेवाप्रदायकलाई १० दिनसम्मको समय दिई त्यसपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिएको छ । स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाईट टेलिकम लगायतका कम्पनीलाई प्राधिकरणले गत चैत १२ गते बक्यौता बुझाउन अन्तिम पटकका लागि असार मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । तर उक्त… The post बक्यौता नतिर्ने सेवाप्रदायकलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टिकरण , लाईसेन्स खारेज हुनसक्ने appeared first on Bizkhabar Online.
हिमालयन बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्व, टिचफर नेपाललाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । हिमालयन बैंकले टिच फर नेपाललाई आर्थिक सहयो गरेको छ । बैंकले ग्रामिण क्षेत्रका समुदायि�
काठमाडौं । हिमालयन बैंकले टिच फर नेपाललाई आर्थिक सहयो गरेको छ । बैंकले ग्रामिण क्षेत्रका समुदायिक÷सरकारी विद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न स्वयंसेवक शिक्षक पठाउन ५ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता प्रदान गरेको हो । ‘एक दिन नेपालका सबै विद्यार्थीहरुले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नेछन’ भन्ने मुल नाराका साथ अगाडी बढेको टिच फर नेपालले हालसम्म विभिन्न ६ जिल्लाका ६७ वटा विद्यालयमा २७० जना स्वयंसेवक शिक्षकहरु पठाई ३० हजार भन्दा बढि विद्यार्थीहरुलाई विज्ञान, गणित, अंग्रेजी लगायतका विषयहरु पढाउँदै आएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शम्सेर राणाले उक्त सहयोग रकम… The post हिमालयन बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्व, टिचफर नेपाललाई आर्थिक सहयोग appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आफ्नो टेलिफोन सेवा जडान तथा पोष्टपेड मोबाईल सेवा पहिलेभन्दा सस्तो दरम�
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आफ्नो टेलिफोन सेवा जडान तथा पोष्टपेड मोबाईल सेवा पहिलेभन्दा सस्तो दरमा उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपाल टेलिकमले बुधबार एक सुचना जारी गर्दै स्थानीय टेलिफोन (पीएसटीएन) जडान र पोष्टपेड मोबाईल सेवाको दर घटाएको जानकारी दिएको हो । चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक विधेयक अनुसार टेलिफोन जडान गर्ने ग्राहकबाट स्वामित्व शुल्क वापत ५ सय रुपैयाँ मात्र लिने व्यवस्था भएपछि टेलिकमले उक्त सेवाको दर घटाएको हो । सरकारले आर्थिक विधेयक २०७६ को दफा १४(१) मा उक्त व्यबस्था राखेको छ । जस अनुसार अब १ हजार ६ सय ३५ रुपैयाँमा… The post नेपाल टेलिकमको शुल्क घट्यो, ९ सय रुपैयाँमै पोष्टपेड सिम appeared first on Bizkhabar Online.
आईएमएस केयरले ल्यायो न्यूरोड सेवाकेन्द्र पुनःसञ्चालनमा, थप १८ सेवा केन्द्र विस्तार गर्दै
काठमाडौं । आईएमएस केयरले न्यूरोड पाको स्थित ताम्राकार कम्प्लेक्समा आफनो सेवा केन्द्र पुनःसुचार�
काठमाडौं । आईएमएस केयरले न्यूरोड पाको स्थित ताम्राकार कम्प्लेक्समा आफनो सेवा केन्द्र पुनःसुचारु गरेको छ । आधुनिक पूर्वाधारले सम्पन्न यस सेवा केन्द्रले विश्व स्तरिय सेवा आफ्ना ग्राहकहरुलाई प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सर्भिस सेन्टरको सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्सका प्रबन्ध निर्देशक तथा उप–सभापति युबियोम वन, ग्रुपका अध्यक्ष दिपक मलहोत्रा, सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्स नेपालका प्रबन्धक प्रणय रत्न स्थापित र ग्रुपका सिइओ दिकेश मलहोत्राले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका छन । ग्राहकहरुलाई सधै उत्कृष्ट सेवा तथा सुविधा दिने र आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानहरुमा समेत १८ सेवा केन्द्रलाई विस्तार गर्दै जाने ग्रुपका अध्यक्ष मलहोत्राले जानकारी दिएका छन… The post आईएमएस केयरले ल्यायो न्यूरोड सेवाकेन्द्र पुनःसञ्चालनमा, थप १८ सेवा केन्द्र विस्तार गर्दै appeared first on Bizkhabar Online.
प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि ३ जनाको नाम सर्टलिस्टमा, कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि ३ जनाको नाम सर्टलिस्टमा परेको छ । संचार त
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि ३ जनाको नाम सर्टलिस्टमा परेको छ । संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयमा गठित छनोट समितिले बुधबार पुरुषोत्तम खनाल, दिपकराज जोशी र नन्दविक्रम अधिकारीको नाम सर्टलिस्टमा राखेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले गत जेठ २७ गते खुलाएको विज्ञापनमा १२ जनाले आवेदन दिएका थिए । जसमध्यये ३ जनाको नाम सर्टलिस्टमा परेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सर्टलिस्टमा परेको ३ जनामध्ये पुरुषोत्तम खनाल हाल प्राधिकरणकै कार्यबाहक अध्यक्ष हुन । पुरुषोत्तम खनालको कार्यवाहकको म्याद सकिन लाग्दा गत जेठ २७ गते खुलाएको विज्ञापनमा देवनारायण… The post प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि ३ जनाको नाम सर्टलिस्टमा, कसले मार्ला बाजी ? appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । सरकारले आजदेखि मालसामान ढुवानी तथा बिक्रीमा ट्रयाकिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ
काठमाडौं । सरकारले आजदेखि मालसामान ढुवानी तथा बिक्रीमा ट्रयाकिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सो प्रणालीको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज एक कार्यक्रमकाबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् । मालसामान बिक्री तथा ढुवानीमा हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण्का लागि उक्त प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । उनले चालू आबको बजेटमार्फत नै चोरी निकासी पैठारी र आन्तरिक उत्पादनको परिवहनमा हुने विचलनलाई नियन्त्रण गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न उत्पादन, परिवहन र बिक्रीसम्मको श्रृखलाई ट्रयाकिङ प्रणालीमा जोडिने बताएका थिए । सरकारले पारवहन तथा बिक्रीसम्मको ट्रयाकिङ प्रणालीलाई कार्यान्यनमा ल्याउने… The post औपचारिक रुपमा सुरु भयो भेहिकल ट्रयाकिङ सिस्टम, चरणबद्ध कार्यान्यनमा लगिने appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा बर्दिवास–बुटवल खण्डको छिट्टै नै विस्तृत �
काठमाडौं । सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा बर्दिवास–बुटवल खण्डको छिट्टै नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम अघि बढाउने भएको छ । यस रेलमार्गमा पर्ने बर्दिवासदेखि बुटवल खण्डमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट रेलमार्ग निर्माण गर्दा उपयुक्त नहुने भन्दै नयाँ डिपिआर निर्माण गर्न लागिएको हो । यस रेलमार्गमा ४ वटा प्याकेजमा अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ । चारै खण्डमा अध्ययनको काम झण्डै अन्तिम चरणमा पुगे पनि बर्दिवास–बुटवाल खण्डमा पुनः अध्ययन हुँदैछ । पूर्व–पश्चिम लम्बाइ झण्डै १ हजार किलोमिटर हुने विभागले जानकारी दिएको छ । पहिलो चरणमा सबै अध्ययन सकिनै लाग्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको… The post पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग : बर्दिवास–बुटवल खण्डको डिपिआर सुरु हुँदै appeared first on Bizkhabar Online.
आजबाट ईन्टरनेटको शुल्क १३ प्रतिशतले बढ्यो, नेपाल टेलिकमले नबढाउने
काठमाडौं । आजदेखि ईन्टरनेटको शुल्क १३ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारले अघिल्लो आर्थिक बर्षको बजेटमा ई�
काठमाडौं । आजदेखि ईन्टरनेटको शुल्क १३ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारले अघिल्लो आर्थिक बर्षको बजेटमा ईन्टरनेटमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने बताएपछि ईन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपालले चालु आर्थिक बर्षदेखि उक्त शुल्क ग्राहकमार्फत उठाउने बताएको हो । नेपाल सरकारले अघिल्लो आर्थिक बर्षदेखि नै उक्त १३ प्रतिशत सेवाशुल्क ईन्टरनेटमा लागु गर्ने बताएपनि चौतर्फी विरोधपछि आईस्पानसँगको सहकार्यमा चालु आर्थिक बर्षमा समायोजन गर्ने बताएको थियो । तर समायोजन गर्ने भनेको १२ महिनासम्म पनि सरकारले कुनै वास्ता नगरेपछि बुधबारदेखि उक्त सेवाशुल्क ग्राहकबाट उठाउने निर्णय गरिएको आईस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार ऐनमै सरकारले… The post आजबाट ईन्टरनेटको शुल्क १३ प्रतिशतले बढ्यो, नेपाल टेलिकमले नबढाउने appeared first on Bizkhabar Online.
आर्थिक बर्षको सुरुमै सेयर बजारमा देखियो चमक, ३३ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर घट्दा लगानीकर्तालाई राहत
काठमाडौं । आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को पहिलो दिन नेप्से परिसुचक दोहोरो अंकले उकालो लागेको छ । बजार खुले�
काठमाडौं । आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को पहिलो दिन नेप्से परिसुचक दोहोरो अंकले उकालो लागेको छ । बजार खुलेदेखि नै उकालो गति लिएको बजार अन्तिम समयमा १५ दशमलव ८५ अंकले उकालो लागेको हो । सेयर बजारमा आजदेखि साविकको पूँजीगत लाभकर ३३ प्रतिशतले घटेको छ । चालू आबको बजेटले गरेको सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै यस अघि लगानीकर्ताले तिर्दै आएको पूँजीगत लाभकर ३३ प्रतिशतले घट्न पुगेको छ । यसअघि लगानीकर्ताले सेयर कारोबारमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका थिए । तर, आजबाट ५ प्रतिशतमात्र तिरे पुग्छ । लगानीकर्ताले माग गरे अनुरुपको… The post आर्थिक बर्षको सुरुमै सेयर बजारमा देखियो चमक, ३३ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर घट्दा लगानीकर्तालाई राहत appeared first on Bizkhabar Online.
डोनाल्ड ट्रम्पको गुगलप्रति गिद्धेनजर, चिनियाँ सरकारसँग मिलेको आरोप
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पछिल्लो समय अमेरिकी कम्पनी गुगलमाथी पनि गिद्धे द
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पछिल्लो समय अमेरिकी कम्पनी गुगलमाथी पनि गिद्धे दृष्टि लगाएका छन । उनले मंगलबार एक कार्यक्रममा गुगलले चीनसँगको मिलेमतोमा देशद्रोहको काम गरिरहेको शंकाले हेरिएको बताएका हुन । उनले आफ्ना समर्थक तथा लगानीकर्ता पिटर थाईलको समर्थन गर्दै गुगल चिनियाँ सरकारसँगको मिलेमतोमा देशद्रोहको काम गरिरहेको जानकारी दिएका हुन । उनले भने, ‘थाईल अन्य मानीसभन्दा व्रिलियन्ट छन जसले यसको बारेमा थाहा पाए ।’ यस्तै उनले गुगललाई निगरानीमा राख्ने बताएका छन । फेसबुक र पेपलमा ठुलो देन भएका थाईलले गुगलले चिनियाँ ईन्जिनियरहरुसँग घुस लिएको र चिनियाँ मिलिटरी सम्बन्धी काम… The post डोनाल्ड ट्रम्पको गुगलप्रति गिद्धेनजर, चिनियाँ सरकारसँग मिलेको आरोप appeared first on Bizkhabar Online.
४०४ जना हवल्दारको बढुवा सिफरिस, नामवली सहित
काठमाडौं । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले ४ सय ४ जना हवल्दारलाई सहायक निरीक्षक (असई) मा बढुवा गरिए�
काठमाडौं । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले ४ सय ४ जना हवल्दारलाई सहायक निरीक्षक (असई) मा बढुवा गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौंका मानव श्रोत एवं प्रशासन विभागले जनपद प्रहरी समुह तर्फको रिक्त रहेको सहायक निरीक्षक पदमा ४ सय ४ जना हवल्दारलाई बढुवाको लागि सिफारिस गरिएको हो । रिक्त रहेको पद बढुवा समितिको असार ३१ गते बसेको बैठकले बढुवाको लागि गरिएको सिफारिस सुची प्रहरी नियमावली २०७१ संशोधन सहितको नियम २७ को उप नियम ४ को प्रावधान अनुसार बढुवाको सिफारिस गरिएको बढुवा समितिको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । The post ४०४ जना हवल्दारको बढुवा सिफरिस, नामवली सहित appeared first on Bizkhabar Online.
एनआईसी एशिया बैंक र ग्राण्डी अस्पतालबीच सम्झौता, स्वास्थ्य उपचारमा साढे ७ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक र ग्राण्डी अन्तररष्ट्रिय अस्पताल धापासीबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौत�
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक र ग्राण्डी अन्तररष्ट्रिय अस्पताल धापासीबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौता पछि बैंकका कर्मचारी, बैंकका डेबिट एवं क्रेडिट कार्डवाहक तथा सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार गराउँदा साढे ७ प्रतिशत सम्मको छुट पाउने भएको छ । बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कुमार राठी र अस्पतालका मार्केटिङ तथा विजनेश डेभलपमेन्ट विभाग प्रमुख दिनेश पौड्यालले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन । बैंकले २ सय ९१ शाखा, ३ सय २ एटिएम, ४७ एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ४१ शाखारहित बैंकिङमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । The post एनआईसी एशिया बैंक र ग्राण्डी अस्पतालबीच सम्झौता, स्वास्थ्य उपचारमा साढे ७ प्रतिशत छुट appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । बाढी पीडितको उद्वार र राहतका लागि पुर्व प्रधानमन्त्री माधब कुमार नेपाल सहित बहालवाला �
काठमाडौं । बाढी पीडितको उद्वार र राहतका लागि पुर्व प्रधानमन्त्री माधब कुमार नेपाल सहित बहालवाला ४ जना मन्त्री बाढी प्रभावित क्षेत्र तराईमा पुगेका छन । गत बिहीबार देखी परेका अविरल बर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोमा परि ८३ जनाले ज्यान गुमाए पछि पूर्व प्रम नेपाल सहितको टोली बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत अवलोकनमा लागि पुगेका हुन । पूर्व प्रम तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सिंचाईमन्त्री बर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुबीर महासेठ, संसदको विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्का, सांसद प्रभु साह… The post बाढी पीडितको उद्वार र राहतका लागि पुर्वप्रम नेपाल सहित ४ जना मन्त्री तराईमा, सँगै समितिका सभापतिहरू पनि appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आफ्नो ईन्टरनेट सेवाको शुल्क नबढाउने भएको छ । अन्य सेवाप्रदायकले साउन १
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आफ्नो ईन्टरनेट सेवाको शुल्क नबढाउने भएको छ । अन्य सेवाप्रदायकले साउन १ गतेदेखि ईन्टरनेटको शुल्क बढाउने घोषणा गरेपछि टेलिकमले भने आफ्नो शुल्क नबढाउने घोषणा गरेको हो । नेपाल टेलिकमले आम उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा ताररहित र तारसहित टेलिफोन सेवा तथा इन्टरनेट सेवाहरु प्रदान गरिरहेको छ । सरकारले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पनि टेलिकमले ग्राहकको सुविधा र सहजतालाई ध्यानमा राखी कम्पनीद्वारा प्रदत्त इन्टरनेट सेवाको महशुल दरमा कुनै वृद्धि नगर्ने जानकारी दिएको हो । सेवाग्राहीलाई अझ बढी सहुलियत दरमा सेवा उपलब्ध गराउन… The post नेपाल टेलिकमले ईन्टरनेटको शुल्क नबढाउने appeared first on Bizkhabar Online.
आर्थिक बर्षको अन्तिम दिन लगानीकर्ता झुक्याएर विदा भयो नेप्से, कारोबार रकममा पनि गिरावट
काठमाडौं । चालू आर्थिक बर्षको अन्तिम दिन बजार खुल्दा उच्च रुपमा बढेको नेप्से परिसुचक अन्तमा सामा�
काठमाडौं । चालू आर्थिक बर्षको अन्तिम दिन बजार खुल्दा उच्च रुपमा बढेको नेप्से परिसुचक अन्तमा सामान्य मात्र वृद्धि भएको छ । बजार खुल्दा नै ३० अंकको आसपासमा बढेको नेप्से परिसुचक बजार बन्द हुँदा ४ दशमलव ४५ अंकले मात्र बढ्न पुग्यो । मंगलबार प्रि कारोबारमा ब्रोकरहरुले चलखेल गर्दा बजार उच्च रुपमा बढ्न पुगेको थियो । जसमा १० र २० कित्ता सेयरको बढि कारोबार गर्दै बजार उचालिएको थियो । सो समयमा सामान्य लगानीकर्ताहरु हौसिएका थिए । बजार खुल्दा १ हजार २ सय ८५ अंकमा पुगेको बजार क्रमश घटाउँदै १ हजार २ सय… The post आर्थिक बर्षको अन्तिम दिन लगानीकर्ता झुक्याएर विदा भयो नेप्से, कारोबार रकममा पनि गिरावट appeared first on Bizkhabar Online.
भदौ २४ देखी डोल्पो महोत्सव हुँदै, ४ सय जना विदेशी पर्यटक भित्र्याइने
काठमाडौं । डोल्पो महोत्सव २०७६ आयोजना हुने भएको छ । डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका र भिजन डोल्पोको संयुक�
काठमाडौं । डोल्पो महोत्सव २०७६ आयोजना हुने भएको छ । डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका र भिजन डोल्पोको संयुक्त आयोजनामा यही भदौ २४ देखि डोल्पो महोत्सव २०७६ हुने भएको हो । २४ गते देखी २८ गतेसम्म ५ दिन चल्ने डोल्पो महोत्सव २०७६ भ्रमण बर्ष २०२० लाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले उक्त महोत्सव आयोजना गर्न लागेको हो । साहसिक पर्यटनको लागि प्रचुर सम्भावना बाकेको महत्वपुर्ण गन्तव्य उपल्लो डोल्पामा महोत्सवको तयारी भईरहेको आयोजक ग्याल्पो थापा भोटेले जानकारी दिएका छन । ‘दर्शन डोल्पोको, आर्जन शान्तिको’ भन्ने मूल नाराकासाथ वि.सं.२०५१ सालमा स्थापना भएको क्रिस्टल माउन्टेन आधारभुत बिद्यालयको स्थापना… The post भदौ २४ देखी डोल्पो महोत्सव हुँदै, ४ सय जना विदेशी पर्यटक भित्र्याइने appeared first on Bizkhabar Online.
उच्च पर्यटक शुल्कको मारमा डोल्पाबासी, शुल्क घटाउन सरकारसँग माग
काठमाडौं । डोल्पाका स्थानीयबासीले उपल्लो डोल्पामा जाने पर्यटकहरुसँग लिने गरेको दस्तुर घटाउन सर�
काठमाडौं । डोल्पाका स्थानीयबासीले उपल्लो डोल्पामा जाने पर्यटकहरुसँग लिने गरेको दस्तुर घटाउन सरकारसँग माग गरेका छन । सो क्षेत्रमा जाने पर्यटकले १० दिनको ५ सय डलर बुझाउँदै आएकोमा दस्तुर बढी भएकाले पर्यटकहरु कम आउने भन्दै पर्यटक दस्तुर घटाउन माग गरेको हो । वडा अध्यक्ष समेत रहेका ग्याल्पो थापा भोटेले भने, ‘उपल्लो डोल्पोमा पुग्ने पर्यटकले १० दिनको ५ सय डलर बुझाउनु पर्छ जसले गर्दा उक्त क्षेत्रमा कम पर्यटक जाने गर्छन ।’ हालसम्म हवाई यातायातलगायत पुल बाटोको पूर्वधार नभएको अवस्थामा समेत विदेशी पर्यटकहरु जाने भएकाले सो क्षेत्रमा जाने पर्यटकहरुलाई लिने गरेको शुल्कमा… The post उच्च पर्यटक शुल्कको मारमा डोल्पाबासी, शुल्क घटाउन सरकारसँग माग appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । बिहीबार देखी परेको अविरल बर्षाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ७८ जना पुगेको छ । गृह मन्�
काठमाडौं । बिहीबार देखी परेको अविरल बर्षाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ७८ जना पुगेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार दिउँसोसम्म ७८ जनाको मृत्यु भएको हो । बाढी पहिरोमा परी घाईते हुनेको संख्या ४० जना पुगेको छ भने ३२ जना बेपत्ता भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल सम्मा नेपाल प्रहरीलगायतले ३ हजार ३ सय ६६ जनाभन्दा बढीको उद्धार गरिएको छ । बाढी पहिरोमा परी भएको क्षतिबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको छ । The post बाढी पहिरोमा परी ज्यान गुमाउनेको संख्या ७८ पुग्यो, ४० घाईते ३२ बेपत्ता appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा रहेको सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । र
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा रहेको सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो नाममा रहेको नेप्सेको १७ लाख २९ हजार ९८९ शदमलव ५० कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । बैंकले उक्त सेयर बिक्री गर्नका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । बैंकले प्रति सेयर मूल्य न्यूनतम मूल्य १ हजार ३२ रुपैयाँ निर्धारण गर्दै सो भन्दा बढीमा मोल बढावढमा लिलामीमा निकालेको हो । उक्त सेयर खरिदका लागि बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचिकृत संगठित संस्थाहरुले आवेदन दिन पाउने छन् । उक्त सेयर खरिद… The post लिलामीमा नेप्सेको सेयर बिक्री गर्दै राष्ट्र बैंक, प्रतिकित्ता मूल्य १०३२ रुपैयाँ appeared first on Bizkhabar Online.
कृषि विकास बैंकमा ३८४ जनाका लागि जागिर, खुल्यो लेखापाल देखि शाखा अधिकृतसम्मको आवेदन
काठमाडौं । कृषि विकास बैकले विभिन्न पदका लागि ३ सय ८४ जनाको लागि दरखास्त आवेदन माग गरेको छ । बैंकल�
काठमाडौं । कृषि विकास बैकले विभिन्न पदका लागि ३ सय ८४ जनाको लागि दरखास्त आवेदन माग गरेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दीमा रिक्त रहेको विभिन्न तहमा आवश्यक जनशक्ति पुर्ति गर्नका लागि उक्त आवेदन माग गरेको हो । बैंकले आह्वान गरेको दरखास्तमा वरिष्ठ शाखा प्रमुखदेखि लेखापाल सम्म योग्यता भएकाले आवेदन दिन पाउने भएका छन । बैंकले वरिष्ठ शाखा प्रमुख ८ जना , वरिष्ठ लेखा अधिकृत २२ जना र वरिष्ठ इन्जिनियर(आइटी २० जनाका लागि आवेदन माग गरेको छ । यस्तै व्यवसाय सहायक १… The post कृषि विकास बैंकमा ३८४ जनाका लागि जागिर, खुल्यो लेखापाल देखि शाखा अधिकृतसम्मको आवेदन appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । आयोजनाको लागत वृद्धि गरी विदेशी मुद्रा अपचलन गर्न लागको आरोप लागेको माथिल्लो त्रिशुल�
काठमाडौं । आयोजनाको लागत वृद्धि गरी विदेशी मुद्रा अपचलन गर्न लागको आरोप लागेको माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले अर्बौ रुपैयाँ कर छुट दिएको छ ।सरकारले विद्युत क्षेत्रको लागि जारी गरेको श्वेतपत्र अनुसार २०८० भित्र बनिसक्ने आयोजनाका लागि ट्याक्स होलिडे (कर छुट) को व्यवस्था भएपनि सो भन्दा पछि बन्ने उक्त आयोजनाको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै कर छुट दिईएको हो । विद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रले २०८० भित्र मात्र नभई अब बन्ने सम्पूर्ण आयोजनाका लागि कर छुट दिनुपर्ने मात्र राख्दै आएका थिए । तर, गतहप्ता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले विदेशी लगानी रहेको… The post माथिल्लो त्रिशुली–१ मा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत भ्रष्टाचारः आईएफसीको दबाब, अर्थमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा २० अर्बको कर छुट appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । माथिल्लो तामोकोशी जलविद्युत आयोजनाको सर्वसाधारण संचालकको निर्वाचन अनिश्चित कालका ल�
काठमाडौं । माथिल्लो तामोकोशी जलविद्युत आयोजनाको सर्वसाधारण संचालकको निर्वाचन अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको छ । आयोजनाले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै उच्च अदालत पाटनको आदेशमा उक्त निर्वाचन स्थगित गरिएको जानकारी दिएको हो । उच्च अदालत पाटनले कम्पनीको ११ औं साधारण सभाको सुचनामा महिला संचालक सम्बन्धी कुनैपनि विषयवस्तु नसमेटिएको भन्दै अर्काे निर्णय नआउँदासम्मका लागि उक्त निर्वाचन स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले ऐनमा महिलाका लागि संचालक पद छुट्याई निर्वाचन गराउनुपर्ने भएपनि आयोजनाको सुचनामा भने उक्त कुुरा समावेश नगरिएको भन्दै उक्त निर्वाचन स्थगित गरेको हो । संचालक पदका १२… The post माथिल्लो तामाकोशी संचालक निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित, अदालतको फैसलापछि मात्र अर्को निर्वाचन appeared first on Bizkhabar Online.
प्रदेश ३ का योजना आयोग उपाध्यक्ष देवकोटाले दिए राजीनामा, यस्तो छ राजीनामा दिनुको कारण
काठमाडौं । ३ नंवर प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले पदबाट राजीनामा दि
काठमाडौं । ३ नंवर प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले पदबाट राजीनामा दिएका छन । उनले मंगलबार आफ्नो व्यक्तिगत कारण देखाई आयोगको उपाध्यक्ष पदबाट राजिनामा दिएका हुन । कुनै दवाबका कारण नभई आफ्नै व्यक्तिगत कारणले नै राजिनामा दिएको बताएका छन । उनले आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पालना गरेको, आफू नियुक्त भएर आएको ४५ दिनमा नै प्रदेश प्रोफाइल तयार पारेको, समयमै आधारपत्र तयार पारेको जानकारी दिएका छन । लगानी सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको तथा प्रदेश सरकारलाई पाँच वर्षसम्म आवश्यक पर्ने विभिन्न योजनाहरु समेत निर्माण गरेको उनको भनाइ… The post प्रदेश ३ का योजना आयोग उपाध्यक्ष देवकोटाले दिए राजीनामा, यस्तो छ राजीनामा दिनुको कारण appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । जयनगर–जनकपुर रेलवे सेवा संचालनमा नआउँदै बाढीले बगाएको छ । बिहीबार देखी परेको अविरल बर�
काठमाडौं । जयनगर–जनकपुर रेलवे सेवा संचालनमा नआउँदै बाढीले बगाएको छ । बिहीबार देखी परेको अविरल बर्षाका कारण जयनगर–जनकपुर रेलवे खण्डको जनकनन्दनी गाउँपालिकाको खजुरी स्टेशन नजिकै ईनरुवामा करिब ७० मिटर रेल्बे ट्रयाक बाढीले बगाएको हो । कमला नदिको तटबन्ध भत्किए पछि उक्त रेलमार्गको इनरुवा क्षेत्रमा रहेको ७० मिटर रेलवे ट्रयाक बाढीले बगाएको हो । रेल विभागका जनकपुर साइट कार्यालयका इन्जिनियर विनोद ओझाले खजुरी स्टेशन नजिकै रहेको इनरुवामा करिब ६०–७० मिटर लिक बाढीले भत्काएको जानकारी दिएका हुन । उनका अनुसार महोत्तरीको खुट्टापिपडाढीमा समेत बाढीले लिक भत्काएको छ । इन्जिनियर ओझाले बाढीले लिक… The post संचालनमा नआउँदै भत्कियो जयनगर–जनकपुर रेलमार्ग, इनरुवामा बगायो ७० मिटर रेलवे ट्रयाक appeared first on Bizkhabar Online.
रौतहटको दुर्गा भगवतीमा बाढी पीडितको बिचल्ली, राहातको पर्खाइमा दिन कटाउँदै
काठमाडौं । यही बिहीबार राती देखी परेको अविरल बर्षाका कारण रौतहट क्षेत्रका बाढी पीडितको बिचल्ली भ�
काठमाडौं । यही बिहीबार राती देखी परेको अविरल बर्षाका कारण रौतहट क्षेत्रका बाढी पीडितको बिचल्ली भएको छ । बिद्यालयहरुमा बसेका बाढी पीडितहरुले अहिले खान समेत पाएका छैनन । दुर्गाभगवती गाउपालिकाको सरस्वती माध्यामिक विद्यालयमा बस्दै आएका सयौ परिवार खाने र बस्ने समस्याले पीडित छन । घरमा भएको लता कपडा, अन्य सरसामानहरु बाढीले बगाएपछि उनीहरु बिद्यालयको चिसो बरन्डामा बस्दै आएका छन । उक्त बिद्यालयमा करिब ३ सय पीडित परिवार बस्दै आएका छन । खाने समस्या छ । धेरै बिरामी पर्न थालेका छन । सुत्केरी, बृद्धबृद्धाहरु बिरामी पर्न थालेका छन । औषधी उपचारको… The post रौतहटको दुर्गा भगवतीमा बाढी पीडितको बिचल्ली, राहातको पर्खाइमा दिन कटाउँदै appeared first on Bizkhabar Online.
हकभन्दा बढी हकप्रद सेयरमा पनि आवेदन दिन पाईने, हट्ला त लिलामीको बाध्यता ?
काठमाडौं । अब कुनै कम्पनीका सेयरधनीले हकप्रदमा आवेदन दिँदा आफ्नो हकभन्दा धेरै सेयरका लागि पनि आव�
काठमाडौं । अब कुनै कम्पनीका सेयरधनीले हकप्रदमा आवेदन दिँदा आफ्नो हकभन्दा धेरै सेयरका लागि पनि आवेदन दिन पाउने भएका छन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उक्त सुविधा दिने जानकारी दिएको हो । हालसम्म कुनै संस्थाको हकप्रद सेयर निश्काशनमा लगानीकर्ताहरुले आफ्नो हकसम्मको मात्रै आवेदन दिन पाउने व्यवस्था रहेको थियो । जसले गर्दा कम्पनीले सार्वजनिक गरेको हकप्रद सेयर बिक्री कमै मात्रामा हुने र पछि त्यसको लिलामी गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्थ्यो । तर बोर्डले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उक्त नयाँ व्यबस्था गरेसँगै कम्पनीले सार्वजनिक गर्ने हकप्रद… The post हकभन्दा बढी हकप्रद सेयरमा पनि आवेदन दिन पाईने, हट्ला त लिलामीको बाध्यता ? appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको सावा र ब्याज तिर्ने समय १५ �
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको सावा र ब्याज तिर्ने समय १५ दिन थपेको छ । बाढी पहिरोको कारण समस्या परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने साँवा ब्याज तथा किस्ता रकम साउन १५ सम्म तिर्दा हुने व्यवस्था गरेको हो । यस अघि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिकामा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकम नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले एक निर्देशन जारी गर्दै आर्थिक बर्ष समाप्त भएको १ महिनाभित्र कायम गर्न पाउने व्यवस्था… The post बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्ने समय थपियो, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा प्रबाह नगरे जरिवाना appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वेबमा आधारित ढुवानीमा ट्र्याकिङ प्रणाली आगामी बर्षदेखी मात्र
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वेबमा आधारित ढुवानीमा ट्र्याकिङ प्रणाली आगामी बर्षदेखी मात्रै लागु गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । चेम्बरले उक्त व्यवस्थाको बारेमा व्यवसायीमा ज्ञानको अभाव तथा नगर क्षेत्र भित्रको स्थानीय ढुवानीको व्यवसायमा थप जटिलता आउने भन्दै उक्त व्यवस्था आगामी बर्षदेखि लागु गर्न आग्रह गरेको हो । चेम्बरले सोमबार अर्थमन्त्री समक्ष एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदे उक्त व्यबस्थाले राजमार्गमा हुने राजस्वका ढाँटहरु कम भएपनि स्थानीय स्तरमा अप्ठ्यारो पार्ने बताएको छ । अनुसन्धान बिभागबाट वेबमा आधारित ढुवानी प्रणाली अन्तरगत एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यवसायीक प्रयोजनको माल सामान ओसारपोसार गर्नु पूर्व सो… The post ढुवानीमा ट्रयाकिङको व्यवस्था तत्काल लागू नगर्न चेम्बरको माग, मजदूरलाई खातामार्फत तलब दिन नसकिने appeared first on Bizkhabar Online.
जनता बैंकको शाखा ललितपुरको खुमलटारमा, शाखा संख्या १४२ पुग्यो
काठमाडौं । जनता बैंकले ललितपुरको खुमलटारमा शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकले विस्तार गरेको उक्त शाखा�
काठमाडौं । जनता बैंकले ललितपुरको खुमलटारमा शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकले विस्तार गरेको उक्त शाखाको बैंक संचालक समिति अध्यक्ष केशब बहादुर रायमाझीले उद्घाटन गरेका हुन । देशको सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले शाखा बिस्तारलाई तिब्रता दिएको बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकको खुमलटार शाखासँगै कुल शाखा संख्या १ सय ४२ पुगेको छ । साथै बैंकले १ सय ८ एटिएम, ५० शाखा रहित बैंकिङ, १ सीमित बैंकिङ ईकाइ, ३ एक्सटेन्सन काउन्टर मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । The post जनता बैंकको शाखा ललितपुरको खुमलटारमा, शाखा संख्या १४२ पुग्यो appeared first on Bizkhabar Online.